Dowladda Soomaaliya oo Trump ugu baaqday inuu ka laabto go’aanka ka Dhanka ah dalal Soomaaliya ay ka mid tahay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo Trump ugu baaqday inuu ka laabto go’aanka ka Dhanka...
Dowladda Soomaaliya oo Trump ugu baaqday inuu ka laabto go’aanka ka Dhanka ah dalal Soomaaliya ay ka mid tahay
Donald Trump, ayaa maalintii Jimcaha saxiixay awaamiir uu dadka u dhashay dalalkan kaga mamnuucayo in ay yimaadaan Mareykanka.
Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa tilmaamay in guud ahaan Somalida oo dhan ay ka xun tahay go’aankan uu qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka, isaga oo sheegay in go’aankaasi uu ku soo aaday, xilli Somaliya ay ka soo kabaneyso dagaalo sokeeye, horumarna ay samaynayso.
Wasiir Hadliye, ayaa sheegay in xukuumada Soomaaliya ka xun tahay in farta lagu soo fiiqo dadka Somaliyeed, xilli sida uu sheegay ay la dagaalan kula jiraan kooxo meel wayn kaga jira argagixisada caalamka.
Wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliya Isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayuu Xukuumadda Washington ugu baaqay in ay dib isugu laabato, arrintaana ay si dhakhsi ah u soo afjarto.
Wasiirka oo waraysi siiyay Idaacadda VOA, ayaa waxaa wax laga weydiiyay tallaabada Somaliya kaga aadan go’aanka Trump, ayuu sheegay in arrintaasi ay mowqif ka qaadan doonaan.
Go’aanka ayaa durbaba saameeyay qoysas Somaliyeed oo dib u dejin ka helay Mareykanka. Qoysaskan oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, ayaa walaac ka muujiyay qaraarka uu saxiixay Madaxweyne Trump
Previous articleMidowga Afrika oo si kuluul uga hadlay go’aanada Trump
Next article12 musharax oo diiday inay ka qayb galaan dood wadaaga musharixiinta